Bethesda kwupụtara nnweta zuru oke nke akwụkwọ mpịakọta ndị okenye: agụba | Gam akporosis
The Elder Scrolls Blades bụ ihe kachasị ọhụrụ na studio a ma ama nke Bethesda egwuregwu vidio. Mgbe ndị ahụ gụsịrị akwụkwọ na-akpọ aha Fallout Shelter, ọ na-ewetara anyị egwuregwu a nke mbụ nke anyị ga-eji mmegharị ahụ buso ndị iro ahụ niile na-echere anyị na mbara igwe nke Bethesda kere ọgụ.
Na agbanyeghị na o werela nkatọ ya, kwuo eziokwu anyị na-eche ihu egwuregwu dị iche nke anyị nwere ike ịchọta na Playlọ Ahịa Google. N'ụzọ ezi uche dị na Skyrim dị anya, mana nke a abụghị ihe mere nkatọ ahụ ji bụrụ, mana n'ihi freemium ahụ na ụdị nke mbụ nwetara ndị egwuregwu ka ha kpokọta akpati na-enweghị ike imeghe ha, belụsọ na ha chere ọtụtụ awa.
Ugbu a, anyị nwere ike ikwu nke ahụ Okenye akwụkwọ mpịakọta nke ndị okenye dị maka onye ọ bụla mgbe ọ na-apụ na beta ma dị site na Playlọ Ahịa Google. Ihe ị ga - achọ bụ iji akaụntụ Bethesda iji nweta egwuregwu ahụ. Ma ebe ọ bụ na ha bụ ndị nweere onwe ha, ị gaghị enwe nsogbu ịbawanye n'ime njem ochie a na ọtụtụ echiche efu.
Okenye akwụkwọ mpịakọta nke ndị okenye na-etinye anyị n'ihu tessitura nke kee anyi bu odo ma biarue obodo anyi nso nke ahụ akwatuola. Anyị ga-ewughachi ya ma bie ndụ na-atọ ụtọ na dungeons iji banye nnukwu akụkọ na-echere anyị.
A Okenye akwụkwọ mpịakọta nke ndị okenye anyị gafere maka nyocha anyị izu ole na ole gara aga na nke ahụ ọ ga - emerịrị ndị Fans na - anwụ anwụ nke saga saga a na ndị na-achọ ihe dị iche na ihe anyị na-ahụkarị n'akụkụ ndị a na gam akporo. A mere nke ọma RPG, ọ bụ ezie na raara onwe ya nye freemium. Eziokwu nke nwere ike iweghachite ndị na-achọ ịgbaso ahụmịhe egwuregwu nke Skyrim na-enye na consoles na PC.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Akwụkwọ mpịakọta ndị okenye: Udiri onye ọ bụla dị ugbu a maka beta
Edere foto mbụ nke Honor 20 Pro